Wasiirka gaashaandhiga soomaaliya ee la kulmay dhigiisa sudan(sawiro) – idalenews.com
Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya oo Maanta ku Booqday Xafiiskiisa Dhigiisa Dalka Sudan ayaa waxa ay ka wada hadleen Arimo badan oo quseeya Labada Dal.
Wasiir C/xakiin Fiqi ayaa u mahadnaqay ugu horeentii Dowladda Sudan iyo Sida walaaltinimada leh ay u garab istaagan tahay Gaar ahaan Siyaasadeeda ay ugu Magac dartay (Taageerada Soomaaliya ee aan kala Go’a lahayn) iyo in ay ka Garab istaagtay Shacabka Soomaaliyeed dhowr Qaybood oo kala ah Dhanka Waxbarashada, Taageerada Dadka Soomaaliyeed ay dhibaatada ku dhacday, Garab istaaga Xukuumad Kasta oo Soomaaliya matasha iyo Qodobo kale.
Dhankiisa Wasiirka Gaashaandhiga Dalka Sudan oo isagana Shir jaraa’id Xarunta Wasaarada Difaaca ee Sudan ku qabtay ayaa isagana sheegay in Soomaaliya ay mar walba garab taagan yihiin Umadda Soomaaliyeed iyo Dowladda .
Waxa uuna sheegay Wasiirka Difaaca ee Dowladda Sudan C/raxmaan Xasan in Sudan ay Diyaar u tahay Sidii ay gacan uga siin lahayd Dhan walba oo Shacabka iyo Dowladda Soomaaliyeed ku Hormarayaan isagoo xusan in Si gaar ah ay Xooga u Sii Saari doonaan Dhanka Soo celinta Ciidankii Xooga Dalka Soomaaliyeed.
Waxaa Kulamadaas goob joog ka ahaa Saraakiin Sar sare oo Wafdiga Dowladda federaalka ah la socda iyo Madaxda Safaarada Soomaaliyeed ee Dalka Sudan oo hor Kacayo Safiirka Safaarada Soomaaliyeed Mudane Maxamed C/laahi Ugaas iyo Xubno kale.
Wasiirka ayaa sidoo kale Booqday Xarumaha ugu waa wayn ee Dowladda Sudan wax ku tababarto Ciidanka Milatariga iyo kuwa la halmaala.